စိတ်ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံသောလိင်တူချစ်သူများနှင့်အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုအန္တရာယ်အပြုအမူများကိုလျှော့ချရန်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၀၁၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
AIDS ရောဂါပြုမူနေ။ 2017 Jun;21(6):1540-1549. doi: 10.1007/s10461-016-1533-4.
Parsons JT1,2,3, Rendina HJ4,5, Moody RL4,6, Gurung S က4,7, Stark တီဂျေ4,6,5, Pachankis je8.
ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျား (GBM) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (SC) ၏မြင့်မားသောနှုန်းထားသတင်းပို့, မရှိသေးပါမျက်မြင်လက်တွေ့အခြေပြုကုသတည်ရှိ။ စိတ်ခံစားမှု Disorders ၏ Transdiagnostic ကုသမှုများအတွက်ညျ့ဝ Protocol ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု SC နှင့်အတူ 13 HIV ပိုး GBM တစ်နမူနာများတွင်စမ်းသပ်ပြီးရှေ့ပြေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအခြေခံအင်တာဗျူးပြီးစီးခဲ့, ဆယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစည်းအဝေးများမှတက်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူတို့၏အမျိုးအ, 11 တစ်3လနောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ချက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ session ကိုတက်ရောက်သူ (သာ4ယောက်ျားအားလုံး 10 အစည်းအဝေးများပြီးစီး) နဲ့ပြဿနာများရှိနေသော်လည်းတိုးတက်မှု SC, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပါအဝင်အားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Decrease မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် HIV အန္တရာယ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Unified Protocol ကို HIV ပိုး GBM ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်သို့သော် session ကိုတက်ရောက်သူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်နှင့်အတူစိန်ခေါ်။ နည်းပါးလာအစည်းအဝေးများအလားတူရလာဒ်များထုတ်လုပ်ရန်လျှင်အနာဂတ်အလုပ်အားလုံးအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်းမှအတားအဆီးများလျော့ကျနိုင်ရှိမရှိစဉ်းစားသင့်တယ်, ဘယ်လိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
KEYWORDS: သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး; ဂေးနဲ့ရိုးရိုးယောက်ျား; HIV ပိုး; စိတ်ကျန်းမာရေး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive